Ingqungquthela ye-Latin American GvSIG, Ukwabelana ngeprojekthi efanayo - ii-Geofumadas
INgqungquthela ye-Latin American GvSIG, Ikwabelana ngeprojekthi efanayo
NgoSeptemba, 2011 GvSIG
Eli ligama apho i-3as eya kuyenza. Iimviwo ze-GvSIG zeLatin America kunye neeCaribbean, eziya kuba yinkomfa yesibini yabaseBrazil. Lo msitho ngamazwe, ngoko siya kubona nxaxheba ukusuka eSpeyin, ePortugal, zeCaribbean nezinye nemeko Latin American apho gvSIG uye waba umkhosi umdla umzamo wokuba isiseko ukwenza amalaphu esemgangathweni phakathi izifundiswa, kurhulumente kunye namashishini ezijoliswe kwiinkonzo nge-Open Source Source.
Kuya kuba 12 14 ukuya 2011 Oktobha, e Foz ukwenza Iguaçu, lo mzi namasiko phakathi imida saseBrazil Paraguay leyo Iguazu Falls adumileyo kunye Itaipu Dam. Injongo yalo kukubonelela indawo yokuhlangana apho ochwepheshe, abaphandi, abaphucululi, abaphuculwayo, iingcali kunye noluntu ngokubanzi, badibana kunye neengxoxo malunga ne-geomatics yamahhala kunye GvSIG.
Kuyathakazelisa, ukuba ngeli thuba, imali efanelekileyo -kunene kakhulu- thetha isiPutukezi, ixabiso eliya kunika umdla othakazelisayo kwiintetho kunye nokuhlala kunye nelizwe esinawo umxholo kunye esithathayo sonke siyancoma.
Uphethe isiseko se-GvSIG siza kuba neengqungquthela ezibini eziza kunika impembelelo ebalulekileyo kwizinto ezilindelekileyo KwiNkomfa Yehlabathi Yesixhenxe NgoNovemba kunye nokuqhubeka komxholo oqaliswe kuyo Imihla Yokuqala yaseArgentina, kutshanje kudlula nje:
Ukuziphatha okutsha kumzekelo omtsha.
gvSIG, into engaphezu kwesayensi.
Eminye imixholo bazise umnikelo eluntwini, ukuze abone ukuba software free egqajukelwa ukukhula okubonakalayo kwimeko yethu, ubuncinane gvSIG esibonakalisa isicwangciso ndlongo jikelele.
Ezinye izihloko ze-ajenda eyidrafti, ncamisa kunje nje amaphepha 12 Spanish, lo gama enye i-22 kunye nomxholo wayo zinto zingumqondiso ukuba Portuguese. Ukuguqulelwa kwayo kuyaqondakala, ngoko ke ndagqiba ekubeni ndihambe njengoko:
Ukusasazwa kwe-gvSIG kwisebe le-Faculty of Architecture
Amava ekusebenziseni i-gvSIG kwinkalo yokufundisa i-GIS
I-Integral Geographical Information System yoLawulo lweeHlathi. ISIFOMAP 3.0
extDMSAR, ithuluzi lokuLawulwa kweDatha elidibeneyo kwi-Geographic Information System gvSIG
Inkqubo yokuBalwa kobubanzi kunye nokumelelwa kweeHlathi zeeHlathi ze-Hydro-regulators i-FORESTA
Amava ekuphuhlisweni kwezicelo zokuhlela i-cartographic nge-plug gvSIG
Impembelelo yokufudukela eRosario
Ukuyila kunye nokusetyenziswa kocociso lwee-intanethi kunye namanethiwekhi edolophu edibeneyo kunye ne-EPA-SWMM. Ityala elithile kwisithsaba se-Barcelona
i-gvSIG isetyenziselwa ukuxhaphazwa kweziseko zedolophu kunye neenkonzo. Ukubonelelwa ngamanzi okusela, ukucoceka, iindlela, ukukhanya koluntu, izithuba eziluhlaza, inkunkuma kunye nezixhobo
I-Attic Interactive Environmental kunye ne-Atlasgraphic Atlas yase-Estuary yaseLaguna dos Patos-RS (AOELP)
I-SIGAP: Inkqubo yeNgcaciso yeNdawo yeCandelo loHlolo oluPhezulu
I-XION COMUNAL - Inkqubo yoLwazi lweGaographic for councils of Venezuela
Tradução do gvSIG nge-portuguese brasileiro - um trabalho colletivo
I-SIG yenza i-passado kwikamva elizayo? Iprojekthi yekhosi ye-História da Unifesp
Sebenzisa i-Case: gvSIG na construcção de Bases para um Sistema de Informações Ambientais
Iphepha leSoftware njengegalelo kwi-Transferência de Tecnologia okanye kwi-Agrária Research Institute yaseMoçambique
I-Capacitação akukho Ukusetyenziswa kweGeotechnologies ukude usebenzisa i-livres ferramentas
Izinto eziphathekayo kwiCandelo loQeqesho kwiGvSig eya kubasebenzi bequmrhu likarhulumente likaMasipala waseBotucatu-SP
Okuhambisa ukusebenzisa ezolimo da terra Safra verão na 2010 / 2011 hayi município ka Derrubadas / RS usebenzisa da análise NDVI multitemporal ukwenza obtido of 5 Landsat TM Imagens
I-Didactics yenkqubo yokusebenzisa okanye ukusetyenziswa kwezithombe ze-satellite ye-Geração de uma iSicwangciso seData yeSicwangciso seDanaltimetric kwisixeko saseMasipala soLawulo lweMasipala
Ukusetyenziswa kwe-gvSIG kungabi ncediso lolawulo lwee-dice espaciais i-Campus yase Universidade Paulista "UJúlio Mesquita Filho" Ukubhaliswa kweCampus
Uhlalutyo lwe-Morphometric lwesitya se-hydrographic baseRio Batatal e-Eldorado / SP com gvSIG + Sextante
I-gvSIG isetyenziswe kwi-avaliação da acuracidade yeemephu zeempawu ezixhomekeke kwindlela yokwandiswa kwe-Air Survey (LAE)
O gvSIG njengesixhobo sokuhlalutya kunye ne-edição yedayisi yedolophu ye-Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal
O Sebenzisa i-gvSIG na construção I-Geographical Information System yeSizwe seSizwe sase-India - Funai
Ukusetyenziswa kweprogram ye-gvSIG ukuqeqeshwa kwe-geoprocessing ye-Engenharia Florestal course ye-Federal University yaseParaná
I-Georeference yeendawo zembali zezinto zakudala ezinokusetyenziswa kweGvSIG Fortificações i-século XVIII eRio Grande
Usebenzise i-gvSIG kunye neenkampani zorhulumente: o imeko da CODEVASF
I-GIS ukuphakamisa iindawo zokungena kunye nenhlekelele ye-naturais no-Vale do Ribeira kunye neLitoral Sul de SP, eBrazil
I-Geoprocessamento kunye nokuhluthwa kweendawo ezidibeneyo kwiindawo zokulondolozwa ngokusisigxina kwe-sub-basin yaseCórrego Pinheirinho
Ulwakhiwo lwe-Geotechnology livre akukho ambiente ye-SAAE iSão Carlos-SP
O gvSIG Desktop njengoko Ferramenta Geoprocessamento Arquiteura na da Infraestrutura Dice Espaciais ukwenza Instituto Chico Mendes da Conservação Biodiversidade - IDE / ICMBio
Ukumelwa nokuhambelana kolwazi lweedolophu hayi i-gvSIG
Ukusetyenziswa kwe-gvSIG akukho mapeamento das Áreas Verdes noMunicípio de Guarulhos
Ukuze uqaphele i-ajenda ecacileyo kunye neenguqu zedijithali zamaphepha, apha ndiyishiya ikhonkco.
Post edlulileyo«Edlulileyo Isilumkiso se-imeyile yamanga egameni likaGeofumed
Post Next Inhliziyo ebizwa ngokuthi "Pepe"Okulandelayo "